Ordesa de Manuel Vilas: ihe ọ bụ na ihe onye edemede ahụ gwara anyị n'akwụkwọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Otu n’ime akwụkwọ nyerela ọtụtụ okwu bụ Nke Ordesa nke Manuel Vilas dere. Ọ bụ ọrụ nke ọtụtụ mmadụ na-ahụ akụkụ nke ndụ ya ka ọ na-egosipụta, ma ọ bụ ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ akụkọ ndụ nke onye edemede ahụ n'onwe ya. Ma Ordesa kariri.
Ọzọ, anyị chọrọ ịgwa gị maka akwụkwọ a, onye dere ya, na ihe niile ị ga-eburu n'uche ibido ịgụ ya ozugbo enwere ike. You chọrọ ịma ihe Ordesa de Manuel Vilas gbasara?
1 Ọnye na-bụ Manuel Vilas
2 Akwụkwọ Ordesa
2.1 Kedu ihe Ordesa gbasara?
3 Gịnị bụ nkọwa nke Ordesa de Manuel Vila?
4 Extrafọdụ extracts si Ordesa de Manuel Vila
Ọnye na-bụ Manuel Vilas
Isi mmalite: RTVE
Manuel Vilas bụ onye edemede a mụrụ na Huesca na 1962. Ọ gụrụ akwụkwọ na Hispanic Philology na, afọ iri abụọ, ọ na-arụ ọrụ dị ka onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Otú ọ dị, ọkpụkpọ oku ahụ mere ka ọ kwụsị ọrụ ya ma kwado akwụkwọ. Ọ malitere ịzụlite uri, yana edemede na akwụkwọ akụkọ. N'ezie, Ordesa abụghị nnukwu ihe ịga nke ọma mbụ ya, tupu ọtụtụ ndị ọzọ agafee ya dịka Aire Nuestro, na 2009, ma ọ bụ Lou Red era español, na 2016.
E kwesịkwara icheta na ọ bụ onye ikpeazụ maka onyinye Planeta na 2019 na ọrụ ya "Alegría sobre las mmekọrịta n'etiti nne na nna na ụmụaka".
Dị ka onye edemede, Ọ rụkọtara ọrụ na ụfọdụ n'ime mgbasa ozi a kacha mara amara na Spain. Anyị na-ekwu maka El Mundo ma ọ bụ El Heraldo de Aragón (ha abụọ sitere na otu Vocento), La Vanguardia, El País, ABC… Ọbụna na redio ha achọtala ma nwee mmekọrịta na Cadena Ser.
Dabere na onye dere ya n’onwe ya, Ordesa bidoro ịkpa ike mgbe nne ya nwụsịrị, nke mere na Mee 2014. Maka Vilas ọ bụ afọ dị njọ, ebe ọ bụ na ọ gbara alụkwaghịm n’oge ahụ.
Akwụkwọ ahụ A malitere ire ya na 2018 site na ụlọ obibi akwụkwọ Alfaguara wee nwee ihe ịga nke ọma. Ọ nwetara mbipụta iri na anọ, ha niile erughị otu afọ, nke mere ka ọ ree ihe karịrị otu narị puku. Ọ bụ akwụkwọ nke afọ (nke 14) maka mgbasa ozi dị iche iche dịka El País, La Vanguardia, El Mundo, El Correo ... Ma ọ gafeela mba ọzọ, ebe ọ bụ na ọtụtụ mba ndị ọzọ chọpụtara ọrụ (United States, United Kingdom, Italy, Portugal…). Ọtụtụ nsụgharị nke akwụkwọ pụtara na otu afọ mgbe e mesịrị, dị ka Italian ma ọ bụ Portuguese.
Kedu ihe Ordesa gbasara?
Ọ bụrụ na anyị gwara gị azịza ọsọ ọsọ ma sie ike, Anyị ga-agwa gị na Ordesa de Manuel Vila metụtara mmekọrịta dị n'etiti nne na nna na ụmụaka.
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ kachasị emetụta onye edemede ahụ n'onwe ya ma taa ọ bụ akwụkwọ ntụaka maka ndị edemede na ndị na-agụ akwụkwọ ọha na eze.
Ọtụtụ ndị ode akwụkwọ ọzọ enyela echiche gbasara Ordesa. Anyị nwere ike igosipụta ụfọdụ okwu ụfọdụ ndị amaara ama dịka:
"Otu n'ime akwụkwọ ndị mmadụ, nke miri emi, ma na-akasi obi nke m gụworo ogologo oge."
«Ọ bụ album, Archive, ebe nchekwa na-enweghị ụgha ma ọ bụ nkasi obi nke ndụ, nke oge, nke ezinụlọ, nke a na-elekọta mmadụ na klas ikpe ọtụtụ mgbalị na obere mkpụrụ. […] Ọ na-ewe ọtụtụ nkenke iji gụọ ihe ndị a, ọ na-ewe acid, mma dị nkọ, ntụtụ ahụ kpọmkwem nke na-emetụta ụwa nke ihe efu. Ihe fodụrụ na njedebe bụ mmụọ dị ọcha nke eziokwu na iru uju nke ihe niile furu efu. "
Para muchos, Ordesa dị ka akwụkwọ ozi Manuel Vila degaara ndị mụrụ ya mgbe ọ nwụsịrị. Site na nkenke isi, nke ejiri njikọta na ibe ya, anyị na-amụta akụkọ banyere onye na-enweghị enyemaka na onye a gbanyere mkpọrọgwụ onye na-anwa ịlanarị dịka o nwere ike, onye na-ahụta ụfọdụ ihe ndị yiri ka "obere na obere" na n'ezie dị mkpa. .
E dere ya n’asụsụ dị mfe mana n’otu oge ahụ siri ike, ma nwee amaokwu ụfọdụ nwere ike isiri ike nghọta, ma ọ bụ ịmata ihe onye edemede ahụ n’onwe ya na-ezo aka na ya. Ọ nwere ahụmahụ, karịsịa na uri, ma ọtụtụ oge ọ na-emehie nke iji ihe ndị a maka akụkọ, nke na-eme ka onye na-agụ ya furu efu.
Banyere akụkọ a, obi abụọ adịghị ya na ọ na-ekwu site n'obi, ebe ọ na-ekpughe ihe o biri, ọ bụ ezie na ọ bụghị na onye mbụ, mana ya na ụdị yiri ya nke na-abụghị naanị ịkọ akụkọ gara aga, kamakwa ọ dị ugbu a onye na-agụ ihe nwere ụzọ ndụ ya. N'iburu n'uche na ndị na-ekwu banyere ndụ mmadụ dị ezigbo mma, ọ bụ akwụkwọ ị nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ụdị edemede ahụ masịrị gị.
Gịnị bụ nkọwa nke Ordesa de Manuel Vila?
Nchịkọta nke Ordesa de Manuel Vila bụ ihe mbụ ma dị ezigbo iche na ihe ị ga-atụ anya na akwụkwọ akụkọ. Edere ya na onye nke ato ma adighi ekpughe ezi ozi nke akwukwo ahu bu, kama o bu ihe ozo. Ikekwe ọ bụ ya mere o ji adọta mmasị.
Edere ya n'oge ụfọdụ site na anya mmiri, na mgbe niile site na mmetụta uche, akwụkwọ a bụ ezigbo akụkọ ihe mere eme nke Spain n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, kamakwa akụkọ banyere ihe niile na-echetara anyị na anyị bụ ndị na-adịghị ike, banyere mkpa ọ dị ibili na ịga n'ihu. ọ dị ka ọ ga-ekwe omume, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọ niile nke jikọrọ anyị na ndị ọzọ ga-apụ n'anya ma ọ bụ gbajie. Anyị na-adị ndụ.
Extrafọdụ extracts si Ordesa de Manuel Vila
Site Rlọ Random, na akwukwo ihe omuma gi, anyi nwere ike inwe a Usoro mbu nke Ordesa tinyere ihe ufodu site na akwukwo. Anyị na-ahapụ ha n'okpuru ka ị nwee ike ikpebi ma ị ga-agụ ya.
Amalitere m ide akwụkwọ a. Echere m na ọnọdụ mkpụrụ obi m bụ ncheta na-edoghị anya nke ihe mere n'otu ebe dị na mgbago ugwu Spain a na-akpọ Ordesa, ebe jupụtara n'ugwu, ọ bụkwa ebe nchekwa edo edo, agba odo na-awakpo aha Ordesa, ma na Ordesa A dọtara ọnụ ọgụgụ nna m n'oge ọkọchị nke 1969. »
«Mgbe ndụ na-ahapụ gị ka ị hụ alụmdi na nwunye nke ụjọ na ọ joyụ, ị dịla njikere maka mmezu. Jọ na-ahụ ụwa nke ụwa. "
“Mama m bụ onye akụkọ na-agba aghara. Mụ onwe m bụkwa. Site na nne m ketara m ọgba aghara akụkọ. Enwetaghị m ya na ọdịnala edemede ọ bụla, nke oge gboo ma ọ bụ nke gara aga. "
“Onye ọ bụla na-a alcoụbiga mmanya ókè na-abịa oge mgbe ọ ga-ahọrọ ma ọ ga-a continuingụ mmanya ma ọ bụ ịnọgide na-adị ndụ. Kinddị nhọrọ mkpoputa: ma ị na-edebe bes ma ọ bụ uves. […] Onye ọ bụla hasụbigara mmanya ókè mara na mmanya bụ ngwa ọrụ na-emebi mkpọmkpọ ụwa. "
«M na-ede n’ihi na ndị ụkọchukwu kụziiri m ka m dee. Narị nde narị ọgwụgwọ. Nke ahụ bụ nnukwu ihere nke ndụ ndị dara ogbenye na Spain: M ji ndị ụkọchukwu ụgwọ karịa ndị Spanish Socialist Workers Party. Ihe ọchị nke Spain na-abụkarị ọrụ nka. "
«Enweghị m mmasị na ihe Spain mere ndị mụrụ m, ma ọ bụ ihe ọ na-eme m. Megide nhapụ nke nne na nna m, enweghị m ike ime ihe ọ bụla, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Enwere m ike ime ka ọ ghara ịbụrụ m eziokwu, mana ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ eziokwu. "
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ordesa nke Manuel Vilas